Maaskaro Qalliinka Caafimaadka La Tuuri Karo
Dharka Ka Hortagga La Tuuri Karo Ee Caafimaadka
Muraayadaha Nabadgelyada Ka-hortagga
Koofiyad la tuuro
Seoul wuxuu bilaabayaa inuu xirto maaskaro maaddaama uu cudurku sii kordhayo
Seoul, caasimada Kuuriyada Koonfureed, waxay ku qasabtay dadka inay xirtaan waji duub ilaa 24-kii si loo xakameeyo faafitaanka degdega ah ee coronavirus cusub ee Seoul iyo agagaarkeeda. Sida ku xusan “amarka masar” ee ay soo saartay dowladda hoose ee Seoul, dhammaan muwaadiniintu waa inay xirtaan maaskaro gudaha ah iyo kuwa ...Akhri wax dheeraad ah »
Faransiiska waxay qorsheyneysaa inay horumariso isticmaalka waji-furka goobta shaqada
Waqtiga boostada: Aug-21-2020
Iyada oo laga jawaabayo dib-u-soo-nooleynta astaamaha cusub ee cudurka faafa, dawladda Faransiiska ayaa 18-kii sheegtay in ay qorshaynayso in ay dhiirrigeliso xidhashada waji-xidhka meelaha qaarkood ee shaqada. Dhawaan, faafitaanka cusub ee faransiiska wuxuu muujiyay calaamado soo kabasho. Marka loo eego xogta ay soo saartay Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha Faransiiska, qiyaastii ...Akhri wax dheeraad ah »
Tirokoobyada shabakadda dibedda ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' bishii Ogosto, 11, Worldometer, ayaa muujisay in illaa 6:30 waqtiga Beijing, 20218840 kiisaska cusub ee cudurka oof wareenka laga helay adduunka, 737488 xaaladoodna ay u dhinteen isugeyn, iyo 82 xaaladood ayaa laga helay 82 dal. Novel coronavirus p ...Akhri wax dheeraad ah »
7 shaqooyin baahi badan loo qabo inta lagu jiro coronavirus: Inta ay bixiyaan - iyo waxa ay tahay in la ogaado ka hor inta aan la codsan
Waqtiga dhejinta: May-28-2020
Qiyaastii 10 milyan oo Mareykan ah ayaa loo xareeyay shaqo la'aanta toddobaadyadii ugu dambeeyay ee Maarso. Warshaduhu oo dhan maahan inay furfurnaadaan ama fasaxaan shaqaalaha, in kastoo. Iyada oo ay sii kordhayaan baahida loo qabo raashinka, musqulaha, iyo gaarsiinta guud ahaan inta lagu guda jiro cudurka dilaaga ah ee coronavirus, warshado badan ayaa shaqaalaysiiya iyo boqolaal t ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa tan waxa la sameeyo goorta aad ku dhowdahay hawlgabnimada iyo hufnaanta adduunka
Waqtiyada ugu fiican, hawlgabku ma sahlana. Coronavirus-ku wuxuu leeyahay kaliya dadka aan xasilloonayn xitaa ka sii badan. Barnaamijka maaliyadeed ee shakhsiga ah ee shakhsiyadeed ee Capital Capital ayaa daraasad ku sameeyay hawlgab iyo shaqaale waqti buuxa ah bishii Meey. In kabadan seddex meelood oo qorsheynayay inay howlgab ka noqdaan 10 sano ayaa sheegay in ka bixitaanka dhaqaale ee Covid-19 ay ka dhigan tahay t ...Akhri wax dheeraad ah »
Xirashada maaskaro waxay wajihi doontaa $ 800 oo ganaax ah imaaraadka carabta
Waqtiga boostada: May-22-2020
Shaqaale caafimaad, xiranaya galoofyada la tuuri karo, wuxuu cabirayaa heerkulka nin jooga xarunta baaritaanka ee loo yaqaan 'coronavirus' xarunta baaritaanka Abriil 1,2020 ee Abu Dhabi, Imaaraadka Carabta. Akhri wax dheeraad ah »
Dib u furida tafaariiqda Apple
Qorshaha dib u furista tafaariiqda Apple: Jeegaga heerkulka, maaskarada qasabka ah iyo 25 dukaan oo dib loo furayo toddobaadkan Akhri wax dheeraad ah »
Maaskarada wajiga iyo meelaha lagu keydiyo barkadda dabaasha: Waa maxay fasaxa xagaaga ee Yurub sida sanadkan u ekaan doono
Waqtiga boostada: Maajo-15-2020
Marka hore, quruumaha midowga yurub waa inay qaabilaan oo kaliya dalxiisayaasha haddii xaaladooda cudurka coronavirus ay ogolaato, taasoo la micno ah in heerka sunta ay inyar xakamayso. Waa in ay lahaato buugag boorar leh oo loogu talagalay cuntada iyo in la isticmaalo barkadaha dabbaasha, si loo xaddido tirada dadka isla hal meel isku mar ...Akhri wax dheeraad ah »
WHO waxay ka digeysaa inay qaadan karto ilaa 5 Sano ka hor intaan la xakamayn cudurka faafa ee coronavirus
ilaa maanta, in ka badan 4.3 milyan oo qof ayuu ku dhacay cudurka loo yaqaan 'Covid-19'. iyadoo 297,465 ay u dhinteen adduunka oo dhan, sida laga soo xigtay JHU Akhri wax dheeraad ah »
Hong Kong shaqada
Waqtiga boostada: May-10-2020
Dadka xiran wejiga wajiga, iyadoo laga hadlayo walaaca cudurka 'COVID-19 coronavirus', ayaa tareen ugu safraya Hong Kong bisha Maajo 10keeda, 2020 Akhri wax dheeraad ah »
Ka hortagga cudurka faafa ee Dongguan ayaa sahayda u dirta dhoofinta iyo kulanka loo baahan yahay
Waxaan kaqeyb qaadanay shirkii waxyaabaha looga hortagayay cudurka faafa oo ay soo abaabushay dowladi Maajo 8, 2020. Waxaana kaqeybqaatey dhoofinta iyo dhoofinta labadaba. Waxaan baranay siyaasadii dhoofinta caadooyinka ee u dambeysay, heerar karantiil oo waxaan la xiriirnay martida ajnabiga kulanka kulanka zoom. Akhri wax dheeraad ah »
Seoul wuxuu bilaabay inuu xirto waji dabool sida cudur faafa ...
Seoul, caasimada Kuuriyada Koonfureed, waxay ku qasabtay dadka inay xirtaan waji duub ilaa 24-kii si loo xakameeyo faafitaanka degdega ah ee coronavirus cusub ee Seoul iyo agagaarkeeda. Marka loo eego "amarka maaskaro" oo la soo saaray b ...
Faransiiska ayaa qorsheynaya inuu kor u qaado isticmaalka maaskaro ...
Iyada oo laga jawaabayo dib-u-soo-nooleynta astaamaha cusub ee cudurka faafa, dawladda Faransiiska ayaa 18-kii sheegtay in ay qorshaynayso in ay dhiirrigeliso xidhashada waji-xidhka meelaha qaarkood ee shaqada. Dhawaan, faransiiska cusub ee faransiiska ayaa muujiyay astaamaha re ...
Qiyaastii tirakoobyada cudurka wadnaha ee ku dhaca banaanka 'coronavirus pneumonia' bishii Ogosto, 11, Worldometer, ayaa muujisay in illaa 6:30 waqtiga Beijing, 20218840 xaaladood oo ah cudurka oof-wareenka cusub laga helay adduunka oo dhan, 737488 xaaladood ayaa laga soo kiciyay ...